Bethroot (ဘတ်ဒ်အမြစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Bethroot (ဘတ်ဒ်အမြစ်)
Bethroot (ဘတ်ဒ်အမြစ်) ကဘာလဲ။
Beth အမြစ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Beth အမြစ်ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုပါသလဲ။
Beth အမြစ်သည် အမြစ်၊ ပင်စည်နှင့် အရွက်တို့ကို ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသော အပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုူးများရှိမည်ကို စိတ်ပူရသော်လည်း ထိုဆေးပင်ကိုအမျိုးသမီးများရာသီသွေးလာသောအချိန် များပြီးနာကျင်သည့်အခါတွင် သုံးကြသည်။ ထိုဆေးပင်ကို အရောင်ကျရန် နှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းများသက်သာစေရန်လည်းသုံးကြသည်။
ထို့အပြင် ပိုးမွှားများကိုက်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ သွေးအကျိတ်၊ သွေးပြန်ကြောဖောင်းခြင်း၊ နှင့် အနာများတွင်လည်း သုံးသည်။ အဖြူဆင်းများသောအခါတွင်လည်း ထိုဆေးပင်ကို သုံးကြသည်။
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး သွေးထွက်ခြင်း၊ မြွေကိုက်သောအနာနှင့် အရေပြားယားယံခြင်းများတွင်လည်း သုံးကြသည်။ ထိုအပင်သည် မျိုးတုန်းတော့မည့် အပင်အမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်ပြီး သဘာဝပေါက်ရောက်သောနေရာများမှ မခူးဖြတ်သင့်ပေ။
ယခုအထိ ထိုဘယဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများ မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ထို့ထက်ပိုသိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် အချို့သော လေ့လာမှုများတွင် သွေးထွက်နည်းစေပြီး မှိုစွဲသောရောဂါများကို ကုသနိုင်သော အကျိုးများရှိကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။
Beth အမြစ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်၏ သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ နှလုံးအခြေအနေ နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများ ကို စောင့်ကြည့်သင့်သည်။
ဆေးပင်ကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပါ။
Beth အမြစ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဤဆေးပင်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်တွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ၎င်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရာသီသွေးကို ပေါ်စေပြီး သားအိမ်ကျုံ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်သည်။ သုတေသနများပို၍ မတွေ့ရှိသေးခင်အချိန်ထိ ထိုဆေးပင်ကို ကလေးနို့တိုက်နေသောမိခင်များနှင့် ကလေးငယ်များကို မတိုက်သင့်ပါ။
Beth အမြစ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Beth ဆေးမြစ်တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိနိုင်သည်။
• နှလုံးကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း- သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ ECG ပုံစံ များပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
• အော့အန်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။
• သွေးကြောများ ကျုံ့ခြင်း။
Beth အမြစ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ထိုဆေးပင်သည် နှလုံးရောဂါတွင် အသုံးပြုသော ဆေးအချို့၏ အစွမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်သဖြင့် အတူတကွအသုံးပြုခြင်းကို သတိပြုသင့်သည်။
Beth အမြစ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ထရီလီယမ် ၏ ဆေးပမာဏအတွက် ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏမရှိပါ။ စံပမာဏသည် ဆေးမြစ်၂ ဂရမ်မှ ၄ ဂရမ် အထိ ကို အကြောဆေးအဖြစ်သွင်းရန် အသုံးပြုကြသည်။ လူနာတိုင်းအတွက် အသုံးပြုရန် ဆေးပမာဏမှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ လူနာ၏ အသက်၊ကျန်းမာရေး၊ နှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါမည်။ ဘယဆေးများသည် အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန် စိတ်မချရပါ။ သင့်တော်သော ဆေးပမာဏအတွက် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Beth အမြစ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
• အမြစ်ကို အမှုန့်ကြိတ်ထားခြင်း
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 67.
Beth root. http://www.drugs.com/npp/bethroot.html. Assessed August 5, 2016.
Beth root. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 404-beth%20root.aspx?activeingredientid=404&activeingredientname=beth%20root. Assessed August 5, 2016.